IToronto iya eMont-Tremblant Iinqwelomoya kwiPorter Airlines ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IToronto iya eMont-Tremblant Iinqwelomoya kwiPorter Airlines ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IToronto iya eMont-Tremblant Iinqwelomoya kwiPorter Airlines ngoku.
Kwimizuzu nje engama-70, abakhweli banokubhabha ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iBilly Bishop Toronto City ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseMont-Tremblant.
Inkonzo yexesha lonyaka yePorter Airlines iqala nge-17 kaDisemba kwaye izakuqhuba de kube nge-28 kaMatshi ngo-2022.
Iinqwelomoya eziqhagamshelayo zikwafumaneka kwiindawo ezahlukeneyo zaseKhanada zePorter Airlines.
Bonke abakhweli abangaphezulu kweminyaka eyi-12 kunye neenyanga ezine bemka kwisikhululo seenqwelomoya saseKhanada kufuneka babonelele ngobungqina bokugonywa ngaphambi kokukhwela, ukusebenza ngoNovemba 30.
I-Porter Airlines iphinda ingenise inkonzo yayo yexesha elithile eMont-Tremblant, Que., Ngexesha leeholide. Inkonzo yamaxesha onyaka iqala nge-17 kaDisemba, iqhube kude kube yi-28 kaMatshi, ngo-2022.
“Sikulungele ukubuyela kwindawo yethu yokuqala yexesha lonyaka ukusukela oko siqale ukusebenza ngoSeptemba,” utshilo uMichael Deluce, umongameli kunye ne-CEO, iPorter Airlines. "IMont-Tremblant yayiphakathi kweendawo zokuqala ePorter ekusekweni kwenqwelomoya, kwaye abakhweli bethu bayayonwabela imisebenzi eyahlukahlukeneyo yasebusika."
Kwimizuzu nje engama-70, abakhweli banokubhabha ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iBilly Bishop Toronto City ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseMont-Tremblant. Iinqwelomoya eziqhagamshelayo nazo ziyafumaneka kwiindawo ezahlukeneyo zePorter. Ishedyuli yasebusika ibandakanya ukuya kwiinqwelomoya ezine ngeveki.
Ukulandela igunya likarhulumente waseCanada lokugonya abakhweli bomoya, bonke abakhweli abangaphezulu kweminyaka eli-12 kunye neenyanga ezine bemka kwisikhululo seenqwelomoya saseCanada kufuneka banike ubungqina bokugonywa ngaphambi kokukhwela, ukusebenza nge-30 kaNovemba.
IiPorter Airlines yinkampani yenqwelo moya yengingqi ikomkhulu eBilly Bishop Toronto Airport kwiSiqithi saseToronto eToronto, eOntario, eCanada. Umnikazi wePorter Aviation Holdings, eyayifudula ibizwa ngokuba yiREGCO Holdings Inc., iPorter isebenza rhoqo ngeenqwelomoya ezicwangcisiweyo phakathi kweToronto kunye neendawo zaseCanada naseUnited States isebenzisa iCanada-yakhiwe. Bombardier Q400 inqwelomoya ye-turboprop.